Buraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooBuraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame
Buraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaama mootummaatin ajjeefame
Guraandhala 21, 2020
Komaander Solomon Taaddasaa Buraayyuutti ajjeefame odeessa jedhu maxxaansaalee marsaa hawwaasaa kana irraan dubbisaa jira.
Dhimma ajjeechaa kanaa namootiin barreessan akka qaamni mootummaa raawwatedha. Keessattuu miseensonni KFO nama kana sabboonaa ta’uuf quuqama sabaa qabaachuu isaa barreessaa jiru.
Akka barreeffamaa jirutti namni kun qaami mootummaa waraanuma walii isaan wal ajjeesuu eegale taanaan waan akeekkate qabaachuu mala.
Akka barreeffame kana qaamni mootummaa Komaandera jedhamu kana ajjeese taanaan, guyyoota muraasa dura magaalaa Buraayyuutti dhimma wellistootaa fi artistootaanis wal qabsiifamee yaada ka’ee barreeffamaa jiru irraa
1. Dhimmi Hawwii H. Qananii akka addunyaatti mirga dhala namaa fi kaaniin faana bu’amee waan jiruuf reebicha ulfaataa wellistuu kana irratti raawwateef Lij Yaared faa irratti raawwate dhoksuuf ta’uu mala. Kana ammoo qaama icciita sana beeku dhabamsiisanii madda ragaa balleessuuf gochuu malu.
2. Jilli KFO guyyaa borii magaalaa Buraayyuutti marii nii gaggeeffata. Sana danquuf dursanii jeequmsa ofumaa uumuuf itti yaadanii gochuu danda’u.
3. Magaalaa Buraayyuu keessatti walii gala sochii dhaabbilee siyyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee akka danqamuuf shira xaxame ta’uu mala.
4. Waraana mootummaa quuqama xiqqaa taatus saba isaaf qabu dhabamsiisuuf fuulleeffannoon shira xaxamee hojjetamaa jiru ta’uu mala. Kana taanaan ammoo bakka biraattis waraana aantummaa qabu akkuma kanaan waraanni mootummaa ajjeesuu danda’a ta’a.
Walii gala gochaan raawwate nama rifaasisa. Biyyattii keessatti qaamni mootumma illee nagaa walii isaa hinqabu taanaan, sochii nageenya uummataa gaaffii guddaa jala jira.
Kanaafuu uummati of ittisuuf baraaramuuf dafee mootummaa ce’umsaa nageenya isaa eegu gaafachuun furmaata ta’a. Qalbeessaa Dhangi’aa
Magaalaa Shaambuu Keessatti Qeerroon Tokko Ajjeesamuun Mormii Kaase Namoo Daandiitin, Caamsaa 15, 2018 WAASHINGITAN, DC…